“Neymar wuu ogyahay inuu sameeyay khaladaad, laakiin…” – Thiago Silva – Gool FM
(Paris) 09 Sebt 2019. Daafaca reer Brazil ee Thiago Silva ayaa sheegay in xiddiga ay isku dalka yihiin ee Neymar Jr uu sameeyay khaladaad intii lagu gudajiray suuqii kala iibsiga ee xagaaga.
Thiago Silva ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay in Thomas Tuchel uu ku tiirsanaan doono laacibka kulamada soo aadan.
27 jirka reer Brazil ee Neymar Jr ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Paris Saint-Germain wuxuuna maamulka ka codsaday inay u ogolaadaan ku laabashada Barcelona.
Balse ugu dambeyntii, Barcelona ayaa ku fashalintay inay dib u ceshato xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr, wuxuuna baaqi ku ahaan doonaa kooxda Paris Saint-Germain xili ciyaareedkan.
Thiago Silva ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caalamiga ah ee “goal.com” ayaa wuxuu sheegay:
“Neymar wuu ogyahay inuu sameeyay khaladaad, laakiin niyadiisa ma aysan xumeyn, waa wiil cajiib ah, waxaana rajeenayaa inuu xili ciyaareed fiican nala sameeyo”.
“Thomas Tuchel wuxuu had iyo jeer sheegaa inuu ku tiirsan yahay Neymar Jr, inta aan ka war qabo, wuxuu diyaar u ahaa kulankii Metz, laakiin sababa la xiriira xaalada suuqa kala iibsiga, ma uusan ciyaarin”.
“Laakiin tababaruhu runtii isaga ayuu ugu tiirsan yahay isaga, maamulka sidoo kale way aaminsan yihiin, anugana waana ku faraxsanahay arrintaas, waxaana rajeynayaa in maalmihiisa soo socda aan ku farxi doono”.